Shina: Manao atsangory eo ambozon’ny filoha Mao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2009 7:41 GMT
Tamin’ny 19 Febroary, dia mivezivezy aty anatin’ny aterineto ny sary izay mampiseho ankizivavy iray atao atsangory eo ambozon'ny Filoha Mao. Ekena fa sarivongana mijoro ao Plaza ao Hunan ilay nosoavaliny , tanàna fiavian’ny Mao io. Kanefa, nvetivety monja dia nameno ny voalohan'ny takelaka maro ny sary, ary nahazo tsikera miisa 50 000 taorian’ny tantara tao Netease.
Tsy mihena akory ny herin’ny fitiavana an'i Mao. Nefa manambara ho an’ny Sinoa mikasika ny fahadisoany izay nahatonga faty olona antapitr’isany nandritra ny Dingan-Dehibe Handroso ireo boky sy ireo fikarohana maro, ary tsy hoe kely akory ny fikorinan’ny tsikera ao amin’ny aterineto, ary mbola manana ny fanohanana mivaingana ho an’ny Sinoa I Mao. Vao haingana, raha toa ka nandetika ny sambon’ny Sinoa ny Rosiana ary milaza I Filipina fa manjaka ao amin’ireo nosy ao amin’ny ranomasina atsimo, dia mivoy hatrany ny fampahatsahivana ny lalan’I Mao mikasika ny tanam-by vahiny ireo vahoaka.
Ao amin’ny pejy valiny ao amin’i Netease mahakasika ity tantara ity, dia ozona avy amin’ny Qingdao netizen ilay tsikera tokana izay nisongadiana ka niseho matetika impito arivo sy roa alina (27 000 fois).
Jereo ireto olona , ireo olona tsy zarizary. Ill – bred.
Miteny ny olona iray avy any Jiangu:
Tena ohatrin’ny tsy nianatra!
Mahagaga, mandray fitsapan-kevitra ihany koa ity tsikera ity:
Tsindrio support/bump raha te hanao firaisana ara-nofo aminy ianao, tsindrio “oppose” raha hoe tsia.ireo manohana (support) , ireo manda 
kanefa, rehefa nanomboka niasa tao amin’ny tranok’ala hafa izahay dia heno matetika I Tianya, izay malaza amin’ity toe-javatra makotroka ity, sady “motera fitadiavana” matanjaka, manana ny resaka misy fanajana.
油条大果子 Eritrereto, efa tafahoatra loatra ny ataon’ny olona:
L**L*na, fa maninona no misy fahasarotana be toy izao e? ankizivavy misoavaly sarivongana fotsiny io ve. Nitondra antsika fiainam-baovao I Mao? Tsy tsara intsony raha oharina amin’ny taloha izany. Fara faha-ratsiny mbola afaka mikarakara zavatra isika teo aloha, toy ny hoe vondrona mpiasa sy antoko, nefa afaka manao izany ve isika ankehitriny?
Niainga ny adi-hevitra makotroka rehefa avy eo.
什锦糖cici Miheritreritra i cici fa tsy dia tokony hitsikera be loatra an’I Filoha Mao isika.
Mao no Ray mpanorina antsika!
Eny fa na dia mety nanao zavatra tsy nety aza izy, tsy tokony hanome tsiny be loatra ianao!
mba jereo aloha e, fa naninona no dia enjehina ohatr'izao ity zazavavy e? Zavatra tsisy dikany akory io fa vongam-bato fotsiny ihany, sa ahoana?Ny antoko Kominista (communiste) izy tenany aza efa nandrava sy nandoro ny sarivongan’ireo mahery fo maro teo amin’ny tantaran’ny Sinoa.
我是散户我怕谁呀 Tohiny, fanoharana misy eo amin’I Mao sy i Saddam:
Ilay Ray mpanorina hoe? Inona moa no nahoriny? Firenen’ny tsolotra ve, didi-jadona sy tsy firaharahana ny vahoaka ve?
Mpamono olona an’ady izy. Indray andro any, ho toy ny sarivongan’I Saddam voazera tao irak izy io.
Miantso kosa i baino5 hampiseho fanajana ny mpitondra taloha.
N’inona n’inona tsy fankasitrahana omenao manohitra ny governemanta sy ny firenena, dia tsy misy hidiran’ity zava-mitranga ity mihintsy amin’izany. Araka ny fanazavan-kevitrareo, ny lavenona avy amin’ny taolan’ny rainareo dia tsy tsinontsinona akory fa tany ihany, koa azoko atao tsara ny mamany eo?
Maro ireo olona no manaiky ity hevitra, milaza fa ny fasana dia tsy kilalao.
Kanefa ihomehezan’i qwerty_any hevitra, izay miheritreritra fa ny fametrahana ny sarivongana ho fitadidy ho an’ny olona dia anton-javatra hafa.
Ha.., ka raha izany, ho apetrakao eo afovoan’ny plaza ve izany ny fasan’ny fianakavianao?
Farany, miteny amim-pahasahiana i 如是我译::
Nisoavaly olona antapirt’isany izy nandritra ny fiainany.
Koa maninona raha mba misoavaly azy fotoana fohy ny olona?
Mpandika teny: Raha liana ianao te ahafantatra misimisy kokoa mikasika an’I Mao sy ny lovany, dia manoro hevitra anao aho hamangy ny Utopian world, toeran- hevitra ara-politika sy ara-kolotoralin’ny mpisolo vava ara-politika moderina ao China, izay manana andalana betsaka miaro ny fihevitra sy foto-kevitry Mao.